အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ကို အဲမရိတ် သို့မဟုတ် ယူအေအီးဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းလေ့ ရှိကြပြီး အာရှတိုက် အနောက်တောင်ဘက် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ရှိ အာရပ်ကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင် တည်ရှိသော ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်ခြင်း ထိစပ်နေသော နိုင်ငံများမှာ အရှေ့ဘက်တွင် အိုမန်နိုင်ငံ နှင့် အနောက်ဘက်တွင် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ တို့ဖြစ်ကြသည်။ ကာတာနိုင်ငံ ၊ အီရန်နိုင်ငံတို့နှင့်လည်း ပင်လယ်နယ်နိမိတ်ခြင်း ထိစပ်လျက် ရှိသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉.၂ သန်းမျှ ရှိပြီး ၁.၄ သန်းမှာ အဲမရိတ် နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကာ ၇.၈ သန်းမှာ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
၁၆ရာစုသို့ ရောက်သော အခါတွင် ကမ်းရိုးတန်းရှိ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ဒေသတွင်းရှိ လူဦးရေ၏ အချို့အဝက်မှာ အော့တမန်အင်ပိုင်ယာ၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် တိုက်ရိုက် ကျရောက်လျက် ရှိသည်။  ၁၇ ရာစုတွင် ယနေ့ခေတ် အဘူဒါဘီ ဟုခေါ်သော နေရာတွင် တည်ရှိခဲ့သော အားကောင်းသော အဖွဲ့အစည်းမှာ ဘာနီရပ်စ် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း ဖြစ်သည်။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွင် နေထိုင်သူများ အပေါ် ပေါ်တူဂီတို့မှ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု ရှိခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်းရှိ မူစကက်၊ ဆိုဟာ နှင့် ခိုရ်ဖာကန် တို့တွင် ဖြစ်သည်။ ၁၆ ရာစုတွင် ကမ်းရိုးတန်းနေ လူမျိုးစုများအပေါ် အယ်ဘူကာကီ နှင့် ၎င်းနောက်မှ လိုက်သော ပေါ်တူဂီတပ်မှူးများမှ သွေးလွှမ်းသော တိုက်ပွဲများဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် ခံတပ်များတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။
ဗြိတိသျှခေတ် နှင့် ရေနံတွေ့ရှိခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ဘီပီ၏ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော ဒီအာစီ ရေနံရှာဖွေရေး ကုမ္ပဏီသည် အဘူဒါဘီနယ် အုပ်ချုပ်သူများထံမှ ကမ်းလွန် ရေနံရှာဖွေခွင့်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ဘီပီသည် နောင်တွင် တိုတယ်လ် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာမည့် ပြင်သစ် ရေနံကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းကာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေး ကုမ္ပဏီများဖြစ်သော အဘူဒါဘီ ပင်လယ်ဒေသ လိမိတက် (အက်ဒ်မာ) နှင့် ဒူဘိုင်း ပင်လယ် ဒေသ လိမိတက် (ဒူမာ) တို့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပင်လယ်ရေအောက် ရေနံ ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းအများအပြားကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နာမည်ကျော် ပင်လယ်ပြင် စူးစမ်းရှာဖွေ လေ့လာသူ ယက် ကော်စတူး ဦးဆောင်သည့် လုပ်ငန်း တစ်ခုလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် ရေပေါ် ပလက်ဖောင်း ရေနံတူးစင်တစ်ခုကို ဂျာမနီနိုင်ငံ ဟမ်းဘတ်မြို့မှ ဆွဲယူလာခဲ့ပြီး အဘူဒါဘီ ရေပိုင်နက် အမ်းရှိတ် ပုလဲကွင်း အပေါ်တွင် နေရာချထားကာ ရေနံတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မတ်လတွင် သာမာမာ အပေါ်ပိုင်းတွင် ပထမဆုံး ရေနံတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ထိုကျောက်ဖြစ်တည်မှု မှတဆင့် တန်ဖိုးရှိသော ရေနံရှာဖွေ တွေ့ရှိမှု အမြောက်အမြားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိစေခဲ့သည်။ ထိုတွေ့ရှိမှုမှာ ထရူရှယ် ကမ်းရိုးတန်းတွင် ပထမဆုံး စီးပွားဖြစ် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး ရေနံ တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။ အက်ဒ်မာသည် ဇာကွန် နှင့် အခြားဒေသများတွင် ကမ်းလွန်ရေနံများ ဆက်လက် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အခြားကုမ္ပဏီများမှလည်း စီးပွားဖြစ် ရေနံတွင်းများ ဖြစ်သော ဒူဘိုင်းကမ်းလွန်ရှိ ဖာတေး ရေနံတွင်း နှင့် ရှာဂျာကမ်းလွန် မူဘာရက် ရေနံတွင်း (အီရန်နှင့် ဝေစုခွဲ) တို့ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ 
ယူအေအီးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် မဟာမိတ်နိုင်ငံများမှ တိုက်ခိုက်သည့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ တာလီဘန် ဆန့်ကျင်ရေး စစ်ပွဲ (၂၀၀၁) ခုနှစ်နှင့် အီရတ်ရှိ ဆဒမ်ဟူစိန်အား တိုက်ခိုက်သည့် စစ်ပွဲ (၂၀၀၃) ခုနှစ် တို့တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အဘူဒါဘီမြို့ပြင်တွင် တည်ရှိသည့် အယ်လ်ဒါဖရာ လေတပ် အခြေစိုက်စခန်းမှနေ၍ အာဖရိက ဦးချိုဒေသ တွင် ဖြစ်ပွားသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး စစ်ပွဲ၏ စစ်ဆင်ရေးကို အထောက်အပံ့ပေးခဲ့သည်။ ထိုအခြေစိုက်စခန်းသည့် ၁၉၉၁ ခုနှစ် ပါရှန်း ပင်လယ်ကွေ့ စစ်ပွဲတွင် လည်းကောင်း၊ မြောက်ဘက်မျှော်ကြည့် စစ်ဆင်ရေး တွင်လည်းကောင်း မဟာမိတ်တပ်များ၏ စစ်ဆင်ရေးများကို အထောက်အပံ့ ပေးခဲ့သည်။ ယူအေအီး အနေနှင့် စစ်ရေးဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး သဘောတူညီချက်ကို ၁၉၉၄ တွင် အမေရိကန် နှင့် ၎င်း၊ ၁၉၉၅ ခုနှစစ်တွင် ပြင်သစ်နှင့် လည်းကောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ပြင်သစ်နှင့် ယူအေအီးနိုင်ငံတို့သည့် အဘူဒါဘီ စော်ဘွားနယ်တွင် ပြင်သစ် အမြဲတမ်း အခြေစိုက် လေတပ်စခန်းတစ်ခုကို တည်ထောင်ခွင့် ပြုသည့် သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ယူအေအီးသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် လစ်ဗျားအား တိုက်ခိုက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စစ်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသတွင် တည်ရှိပြီး အိုမန် ပင်လယ်ကွေ့ နှင့် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့တို့နှင့် ထိစပ်လျက် ရှိကာ အိုမန် နိုင်ငံ နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံ တို့ ကြားတွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် မဟာဗျူဟာ ကျသော နေရာဖြစ်သည့် ကမ္ဘာ့ရေနံစိမ်းများ ဖြတ်သန်းသယ်ဆောင်ရာ ဟော်မွတ်ဇ် ရေလက်ကြားသို့ တောင်ဘက်မှ ချဉ်းကပ်ရာ ဒေသ တလျှောက်တွင် တည်ရှိသည်။
ယူအေအီးနိုင်ငံ၏ ကမ်းရိုးတန်းမှာ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့၏ တောင်ဘက်ကမ်းခြေတွင် ၄၀၄မိုင် (၆၅၀ ကီလိုမီတာ) မျှ ဖြန့်ကျက် တည်ရှိသည်။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ဆားလွင်ပြင်များ အများဆုံး ပါဝင်ပြီး ကုန်းတွင်းပိုင်း အတော်ဝေးဝေးထိ တည်ရှိသည်။ အကြီးဆုံး သဘာဝ ဆိပ်ကမ်းမှာ ဒူဘိုင်းတွင် တည်ရှိသော်လည်း အဘူဒါဘီ၊ ရှာဂျာနှင့် အခြားဒေသတို့တွင် ဆိပ်ကမ်းများကို သောင်တူး တည်ဆောက် ထားသည်။ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်း ကျွန်း အများအပြား ရှိပြီး အချို့သော ကျွန်းများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို အီရန်နိုင်ငံ၊ ကာတာနိုင်ငံ တို့နှင့် နိုင်ငံတကာတွင် အငြင်းပွားဆဲ ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော ကျွန်းမများ နှင့်အတူ များပြားလှသော သန္တာကျောက်တန်းများ၊ ရွေ့လျားနေသော သောင်ခုံများကြောင့် ရေကြောင်းသွားလာရေးကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသည်။ ပြင်းထန်သောလှိုင်းနှင့် မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိသော လေပြင်းများကြောင့် ကမ်းခြေအနီး သင်္ဘောများ သွားလာမှုကို ပိုမို ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ယူအေအီးသည် အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တွင်လည်း အယ်ဘာတီနာ ကမ်းရိုးတန်း ဖြန့်ကျက် တည်ရှိလျက် ရှိပြီး ဟော်မွတ်ဇ် ရေလက်ကြား အာရေဗျ ကျွန်းဆွယ် ထိပ်ဆုံးရှိ မူဆန်ဒမ် ကျွန်းဆွယ်မှာမူ ယူအေအီးနိုင်ငံ ကြားခံထားသော အိုမန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားမြေ ဝန်းရံနယ် ဖြစ်သည်။
အဘူဒါဘီနယ်၏ တောင်ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်တို့တွင် ကျယ်ပြန့်ပြီး ရွေ့လျားလျက် ရှိသော သဲသောင်ခုံများ ဖြစ်ပြီး ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံ၏ လူမနေသော ဒေသဖြစ်သော ရပ်ဘ် အယ်လ် ခါလီနှင့် ပေါင်းစပ် သွားသည်။ အဘူဒါဘီ၏ သဲကန္တာရနယ်တွင် အရေးပါသော အိုအေစစ်နှစ်ခုရှိပြီး အမြဲတမ်း နေထိုင်ရန် နှင့် စိုက်ပျိုးရန် လုံလောက်သော မြေအောက်ရေကို ထိုအိုအေစစ်တို့မှ ပံ့ပိုးပေးသည်။ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော လီဝါ အိုအေစစ် မှာ တောင်ဘက်တွင် ရှိပြီး ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ နှင့် နယ်နိမိတ် သတ်မှတ် မထားသော နယ်စပ် အနီးတွင် ဖြစ်သည်။ လီဝါ၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ၆၂မိုင် (၁၀၀ ကီလိုမီတာ) အကွာတွင် အယ်လ်ဘူရိုင်မီ အိုအေစစ်ရှိပြီး ၎င်းမှာ အဘူဒါဘီနှင့် အိုမန် နယ်စပ် နှစ်ဘက်စလုံးသို့ ဖြန့်ထွက်လျက် ရှိသည်။ အိုမန်နိုင်ငံ နယ်စပ် အနီးရှိ ဇက်ဟာ ကန်မှာ လူလုပ်သော ရေကန် ဖြစ်သည်။
ဒေသရင်း အပင်များနှင့် တိရစ္ဆာန်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
အိုအေစစ်များတွင် စွန်ပလွံပင်များ၊ အကေးရှားပင်များ နှင့် ယူကလစ်ပင်များ ပေါက်ရောက်လျက် ရှိသည်။ သဲကန္တာရ ဒေသတွင် ဒေသရင်း အပင်များမှာ အလွန်ရှားပါးပြီး မြက်ပင်များနှင့် ဆူးခြုံများသာ ရှိသည်။ ဒေသခံ တိရစ္ဆာန်များမှာ အလွန်အအမင်း အမဲလိုက်ခြင်းကြောင့် မျိုးသုဉ်းလု နီးပါး ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဘာနီရပ်စ်ကျွန်းတွင် ရှိတ် ဇာယတ် ဘင် စူလ်တန် အယ်လ် နာဟာယန်းမှ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သော သဘာဝ ထိန်းသိမ်းရေ အစီအစဉ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး အချို့ တိရစ္ဆာန်များ ဆက်လက် ကျန်ရှိနေခဲ့ပြီး အာရေဗျ ဒရယ်များ နှင့် ကျားသစ်များမှာ ဥပမာ ဖြစ်သည်။ ကမ်းရိုးတန်းငါး နှင့် နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင် မက်ကရယ်ငါး၊ ပါ့ချ် ငါး နှင့် တူနာငါး တို့အပြင် ငါးမန်း နှင့် ဝေလငါးတို့ ပါဝင်သည်။
ယူအေအီးသည် အခြားနိုင်ငံများနှင့် သံတမန် ဆက်ဆံရေး၊ စီးပွားရေး အရ ဆက်ဆံရေး ကျယ်ပြန့်စွာ ရှိသည်။ ယူအေအီးသည် အိုပက် အဖွဲ့ နှင့် ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂတို့တွင် အရေးပါသော နေရာမှ ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး ပင်လယ်ကွေ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကောင်စီ (GCC) ကို စတင်တည်ထောင်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သော အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။
ယူအေအီးသည် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ တာလီဘန် အစိုးရကို တရားဝင် အစိုးရ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သော နိုင်ငံ ၃ နိုင်ငံ ထဲမှ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ (အခြား နှစ်နိုင်ငံမှာ ပါကစ္စတန် နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ တို့ ဖြစ်သည်။ ယူအေအီးသည် စက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားသည့် အချိန်တိုင်အောင် တာလီဘန်တို့နှင့် သံတမန် ဆက်ဆံရေး ရှိခဲ့သည်။ ယူအေအီးသည် အီဂျစ်နိုင်ငံ နှင့် ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေးရှိပြီး အာရပ်ကမ္ဘာမှ နိုင်ငံများတွင် အီဂျစ်၌ အများဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်သော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသည် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု စတင်တည်ထောင်သည့် အချိန်တွင် ပထမဆုံး တရားဝင် အသိအမှတ် ပြုသည့် နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ယူအေအီး၏ အဓိက စီးပွားဖက် နှင့် ကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံ အဖြစ် ယနေ့တိုင်အောင် ဆက်လက် ရှိနေခဲ့သည်။ ပါကစ္စတန် ကျွမ်းကျင် အရာထမ်း ၄ သိန်းကျော် ယူအေအီးတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့သည် ကာကွယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီချက်များနှင့် စစ်လက်နက်ပစ္စည်း ပံ့ပိုးရောင်းချရေးတို့တွင် မဟာဗျူဟာကျ အရေးပါသော နေရာမှ ပါဝင်ပတ်သက်လျက် ရှိကြသည်။  ယူအေအီးသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ပြင်သစ်ထံမှ ရပ်ဖ်အေအယ်လ် တိုက်လေယာဉ် အစင်း ၆၀ ဝယ်ယူရန် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ယူအေအီးသည် အမေရိကန်တို့အား ဆီးရီးယားရှိ အစ္စလာမ်နိုင်ငံ (အိုင်အက်စ်)တို့အား လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု ပထမဆုံး အကြိမ် တိုက်ခိုက်ရာတွင် ကူညီခဲ့သည်။
ရာဇဝတ်မှုများ ဖြစ်သော ကြာခိုမှု၊ လက်မထပ်မီ လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့် အရက်သောက်သုံးမှုများ အတွက် ကြိမ်ဒဏ်ကို ပြစ်ဒဏ် တစ်ခု အနေနှင့် သတ်မှတ်သည်။ ရှာရီယာတရားရုံးမှ ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၈၀ မှ ၂၀၀ အထိ ပေးခြင်းကို တရားဝင် အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ လူတစ်ယောက်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းစေရန် နှုတ်ဖြင့် စော်ကားခြင်းမှာ တရားမဝင်ဘဲ ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၈၀ အပြစ်ပေးနိုင်သော အမှု ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကြားတွင် ယူအေအီးရှိ လူအမြောက်အမြား ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၁၀၀ အပြစ်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ လတ်တလော ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသား နှစ်ဦးမှာ အမျိုးသမီး တစ်ဦးအား ရိုက်ပုတ်ခြင်းနှင့် စော်ကားခြင်း ပြုသဖြင့် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၈၀ အပြစ်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွင်း နိုင်ငံခြားသား အရာထမ်း တစ်ဦးအား အဘူဒါဘီတွင် အရက်သောက်၍ မတ်တပ်သွား ကလေးငယ် တစ်ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းကြောင့် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် နှင့် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၈၀ အပြစ်ပေးခြင်း ခံရသည်။ မွတ်စလင်များ အတွက် အရက်သောက်ခြင်းသည် တရားမဝင်ဘဲ ကြိမ်ဒဏ် ၈၀ အပြစ်ပေးခြင်း ခံရနိုင်သည်။ ရံဖန်ရံခါ ဆိုသလိုပင် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၄၀ အပြစ်ပေးလေ့ ရှိသည်။ တရားမဝင်သော လိင်ဆက်ဆံမှု အတွက် ရံဖန်ရံခါတွင် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၆၀ အပြစ်ပေးလေ့ရှိသည်။ စော်ဘွားနယ် အချို့တွင် ကြိမ်ဒဏ် ပေးသည့် အခါ ပုံမှန်အားဖြင့် အချက် ၈၀ ပေးလေ့ ရှိသည်။ ရှာရီယာ တရားရုံးမှလည်း အိမ်ဖော် အလုပ်သမားများကို ကြိမ်ဒဏ် အပြစ်ပေးလေ့ ရှိသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဖိလစ်ပိုင် လူမျိုး အိမ်အကူ အမျိုးသမီးမှာ တရားမဝင် ပဋိသန္ဓေ ဆောင်မှုဖြင့် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၁၀၀ အပြစ်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ အရက်မူး၍ ကားမောင်းခြင်းကို အလွန် တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားပြီး ကျူးလွန်ပါက ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၈၀ ချမှတ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံခြားသား အရာထမ်း အများစုမှာ အရက်မူး၍ ကားမောင်းခြင်းကြောင့် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၈၀ ချမှတ်ခြင်း ခံကြရသည်။ အဘူဒါဘီတွင် လူမြင်ကွင်း၌ နမ်းရှုံ့ခြင်းအတွက် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၈၀ ပေးခြင်း ခံရသောသူ အများအပြား ရှိသည်။ ယူအေအီး၏ ဥပဒေတွင် လက်မထပ်မီ လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုခြင်း အတွက် ကြိမ်ဒဏ် အချက် ၁၀၀ အပြစ်ပေးခြင်း ခံရနိုင်သည်။
ယူအေအီးသည် အာရပ်နွေဦး တော်လှန်ရေးမှ လွတ်ကင်းခဲ့သော်လည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အတွက် တောင်းဆိုကြသော အဲမရိတ် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အယောက် ၁၀၀ ကျော်မှာ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ၍ ညှင်းပန်း နှိပ်စက် ခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ယူအေအီး အစိုးရသည် တိတ်တဆိတ် ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခြင်းများကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားသား အမြောက်အမြားနှင့် အဲမရိတ်နိုင်ငံသားများမှာ အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ပြန်ပေးဆွဲခြင်းကို ခံခဲ့ကြရသည်။ ယူအေအီး အစိုးရမှ ထိုသူများအား ဖမ်းဆီးထားကြောင်းကို ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေသည်ကို ဖုံးကွယ်ထားကာ ထိုသူများအား ဥပဒေ၏ အကာအကွယ် အပြင်ဘက်တွင် ထားရှိခဲ့သည်။ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့မှ ယူအေအီး အစိုးရ၏ တိတ်တဆိတ် ဖမ်းဆီးခြင်း နှင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတို့မှာ အလွန်စိုးရိမ်စရာ ကောင်းသော အခြေအနေရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
၂၀၀၉ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သည့် ဗွီဒီယို အခွေတစ်ခွေအား ယူအေအီးမှ တိတ်တဆိတ် ခိုးထုတ်လာခဲ့ပြီး ထိုဗွီဒီယိုတွင် ရှိတ် အစ်ဆာ ဘင် ဇာယတ် အယ်လ် နာဟာယန်း မှ လူတစ်ဦး (မိုဟာမက် ရှား ပူး) အား ကျာပွတ်၊ လျှပ်စစ် နွားနှင်တံ နှင့် သံချောင်းများ ထိုးထွက်နေသော သစ်သားပြားတို့ဖြင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် ၎င်း၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ကားဖြင့် ကြိမ်ဖန်များစွာ ဖြတ်ကြိတ်နေသည်ကို ပြထားခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အစ်ဆာသည် တရားရုံးသို့လာပြီး အပြစ်မရှိကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ အမှုမှာ ၂၀၁၀ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး အစ်ဆာအား မိုဟာမက် ရှားပူး အား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု အတွက် အပြစ် မရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေး အဖွဲ့မှ ထိုအမှုကို ဝေဖန်ခဲ့ပြီး အစိုးရအား ယူအေအီး လုံခြုံရေး အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အခြား အာဏာပိုင် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သည့် စွပ်စွဲချက်များကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် လွတ်လပ်သော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့၍ ဆောင်ရွက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ထိုဆုံးဖြတ်ချက် အတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး အဲမရိတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိ လူများ အားလုံး "တရားဥပဒေ ရှေ့မှောက်တွင် အညီအမျှ ရှိရမည်" ဟု ဆိုခဲ့ကာ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်အား ဂရုတစိုက် ပြန်လည် သုံးသပ်ရန်နှင့် ထိုအမှုအား တရားမျှတမှု အပြည့်အဝ ရှိကြောင်း သေချာအောင် ပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် လမ်းပေါ်ရှိ မတော်တဆမှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားပြီး ဒေသခံ ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးမှ နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား တိုက်မိသော ဗွီဒီယို တစ်ခုအား ယူကျုဘ်၌ တင်ထားခဲ့သည်။ ဒေသခံ ယာဉ်မောင်းမှ နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းအား ၎င်း၏ ဦးခေါင်းဆောင်းအား ကျာပွတ်သဖွယ် အသုံးပြု ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီး မခံချိ မခံသာ ဖြစ်အောင် ပြောဆိုနေသည်မှာ ဖြတ်သွားဖြတ်လာများမှ ဝင်ရောက် မတားမြစ်မီ အချိန် အထိ ဖြစ်သည်။ ခဏမျှ အကြာတွင် ဒူဘိုင်းရဲတို့မှ ထိုဗွီဒီယိုကို ရိုက်ကူးသူအား ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုဒေသခံ ယာဉ်မောင်းမှ ယူအေအီး အစိုးရမှ ရာထူးကြီး ဝါကြီး ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်ဖြစ်သည်ကို အများ သိရှိလာခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် ဒူဘိုင်းနှင့် ၎င်းတို့မြို့ နေထိုင်သူများအား အဆိုးဘက်မှ ပုံဖော်ထားသည့် ယူကျုဘ်တွင် တင်ထားသော ဟာသ ဗွီဒီယို တစ်ခု အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံသား တစ်ဦးနှင့် ယူအေအီး နိုင်ငံသား အချို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဗွီဒီယိုမှာ ဆက်တ်ဝါ ဒေသတွင် ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ဒူဘိုင်းမှ ဂိုဏ်း အဖွဲ့များ ရိုးရှင်းသော လက်နက်များဖြင့် တိုက်ခိုက်နိုင်ရန် သင်ကြား ပြသနေပုံ ဖြစ်ပြီး ထိုရိုးရှင်းသော လက်နက်များတွင် ဖိနပ် စသည် တို့လည်း ပါဝင်သည်။. ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံအသီးသီးမှ နိုင်ငံသားများ ပြစ်မှုကျူးလွန်သည့် အတွက် ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ ခံကြရသည်။ ဩစတြေးလျ အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ တရားမဝင် ပါကင်ထိုးထားသော ကားတစ်စင်း၏ ပုံကို တင်မိရာမှ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် မကောင်း ရေးသည်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ သူမသည် နောင်တွင် ယူအေအီးမှ ပြန်ပို့ခံခဲ့ရသည်။
ဒူဘိုင်းသည် ၂၀၀၇-၂၀၁၀ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းတွင် ထိခိုက်ခဲ့ပြီး အဘူဒါဘီ၏ ရေနံ ကြွယ်ဝမှု ဖြင့် ကယ်တင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းသည် ဖက်ညီ ဘတ်ဂျက် ရှိသဖြင့် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို ညွှန်ပြလျက် ရှိသည်။ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ယူအေအီး၏ စီးပွားရေး တစ်ခုလုံးအတွက် တိုးတက်မှု ပြနေသည့် ကဏ္ဍ ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတို့ အများဆုံး လာရောက် လည်ပတ်ရာ နေရာ ဖြစ်သည်။ မာစတာ ကတ်ဒ်၏ နှစ်စဉ် ကမ္ဘာတဝှမ်း အရောက်သွားရာ မြို့တော်များ ညွှန်းကိန်း၌ ဒူဘိုင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီသွားတို့ အတွက်ပဉ္စမမြောက် ရေပန်း အစားဆုံး နေရာ ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းသည် ယူအေအီး ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား လုပ်ငန်း စီးပွားရေး၏ ၆၆% ကို ရယူထားပြီး အဘူဒါဘီမှာ ၁၆% နှင့် ရှာဂျာမှာ ၁၀% တို့ အသီးသီး ဖြစ်ကြသည်။ ဒူဘိုင်းသည် ၂၀၁၃ တွင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား ဧည့်သည် ၁၀ သန်းကို လက်ခံခဲ့သည်။
ယူအေအီးတွင် ဒေသအတွင်း၌ အတိုးတက်ဆုံးနှင့် အဆင့်မြင့်ဆုံး အခြေခံ အဆောက်အအုံ ရှိသည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များမှစ၍ ယူအေအီးသည် အခြေခံ အဆောက်အအုံအတွက် ဒေါ်လာ ဘီလီယံပေါင်း မြောက်များစွာ သုံးစွဲခဲ့သည်။ ထိုတိုးတက်မှုများမှာ စော်ဘွားနယ် အကြီးများ ဖြစ်သော အဘူဒါဘီနှင့် ဒူဘိုင်းတို့တွင် ပို၍ ထင်ရှားသည်။ မြောက်ဘက်ပိုင်းရှိ စော်ဘွားနယ်များမှာလည်း နောက်မှ လိုက်လာလျက် ရှိနေကြပြီး လူနေရန်နှင့် စီပွားရေး ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်သူများကို အဓိက အခွင့်အရေးများ ပြန်လည် ပေးအပ်လျက် ရှိသည်။
အကောင်းဘက်မှ ပြောရမည်ဆိုလျှင် လတ်တလော Bayt.com ၏ စစ်တမ်းအရ ယူအေအီးတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၅၆% မှာ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး တိုးတက်လာလိမ့်မည်ဟု ယူဆလျက် ရှိကြသည်။
ဥရောပ သားများ နေထိုင်မှုမှာလည်း တိုးပွားလျက် ရှိပြီး အထူးသဖြင့် ယဉ်ကျေးမှု စုံလင်သော ဒူဘိုင်းကဲ့သို့သော မြို့ကြီးများတွင် ဖြစ်သည်။ ဥရောပ၊ ဩစတြေးလျ၊ မြောက်အမေရိက နှင့် လက်တင်အမေရိကတို့မှ အနောက်တိုင်းသား ဝန်ထမ်းများမှာ ယူအေအီး လူဦးရေ အတွင်း ၅၀၀,၀၀၀ မျှ ရှိသည်။ ဗြိတိသျှ နိုင်ငံသား ၁၀၀,၀၀၀ ကျော် နိုင်ငံ အတွင်း နေထိုင်လျက် ရှိသည်။ ကျန်ရှိသော လူဦးရေမှာ အာရပ်နိုင်ငံများမှ ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၀၅ ခုနှစ် စာရင်းအရ စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၇၆%မှာ မွတ်စလင်၊ ၉% မှာ ခရစ်ယာန် နှင့် ၁၅% မှာ အခြား (အဓိက အားဖြင့် ဟိန္ဒူ) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ လူဦးရေ စာရင်းတွင် ခေတ္တလာလည်သူများ နှင့် အလုပ်သမား များကို ထည့်သွင်း ရေတွက်ချင်း မရှိဘဲ ဘာဟိုင်း နှင့် ဒရုဇ် တို့ကို မွတ်စလင် အဖြစ် ထည့်သွင်း ရေတွက်သည်။ အဲမရိတ် နိုင်ငံသားများတွင် ၈၅% မှာ ဆွန်နီ မွတ်စလင်များ ဖြစ်ကြပြီး ၁၅%မှာ ရှီယာ့ မွတ်စလင်များ ဖြစ်ကြကာ ရှီယာ့ အများစုမှာ ရှာဂျာ နှင့် ဒူဘိုင်းတို့တွင် စုစည်းလျက် ရှိသည်။ အိုမန်မှာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတို့မှာ အီဘာဒီများ ဖြစ်ပြီး ဆူဖီတို့၏ အယူအဆများလည်း လွှမ်းမိုးမှု ရှိသည်။
အဲမရိတ် ယဉ်ကျေးမှုသည် အရှေ့ အာရေဗျ ယဉ်ကျေးမှု၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။ လီဝါသည် ဒေသအတွင်း သီဆိုကခုန်လေ့ ရှိသော ဂီတ နှင့် အက အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး အာဖရိက ဂရိတ်လိတ် ဒေသမှ ဘန်တူလူမျိုးတို့မှ ဆင်းသက်လာသော အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အဓိက ဖြစ်သည်။  ဒူဘိုင်း ကန္တာရ ရော့ခ် ဂီတ ပွဲတော်သည် ဟဲဗီး မက်တယ်လ် နှင့် ရော့ခ် ဂီတပညာရှင်များ ပါဝင်သော အဓိကပွဲတော် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုတွင် ရုပ်ရှင်ရုံ အနည်းငယ်သာ ရှိသော်လည်း တိုးချဲ့လျက် ရှိသည်။
ခရစ်ကက် ကစားနည်းမှာလည်း ယူအေအီးတွင် ရေပန်းအစားဆုံး ကစားနည်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး တောင်အာရှ ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ၊ ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း နှင့် ဩစတြေးလျ မှ နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်း အများအပြား ရှိခြင်းမှာ အဓိက အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ရှာဂျာရှိ ရှာဂျာ ခရစ်ကက် အသင်း အားကစားကွင်း၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တက်စ် ခရစ်ကက် ပြိုင်ပွဲကို ၄ ကြိမ်တိုင်အောင် အိမ်ရှင် အဖြစ် ကျင်းပခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ အဘူဒါဘီရှိ ရှိတ်ဇာယတ် ခရစ်ကက် ကစားကွင်းတွင်လည်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရစ်ကက် ကစားပွဲများကို အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခဲ့သည်။ ဒူဘိုင်းတွင် ခရစ်ကက်ကွင်း အမှတ် ၁ နှင့် ၂ ဆိုသော ခရစ်ကက် ကစားကွင်း ၂ ခုရှိပြီး တတိယမြောက် ဖြစ်သော ဒီအက်စ်စီ ခရစ်ကက် ကစားကွင်းမှာ ဒူဘိုင်း အားကစား မြို့တော်၏ တစိတ်တဒေသ ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရစ်ကက် ကောင်စီ ရုံးစိုက်ရာ မြို့လည်း ဖြစ်သည်။ ယူအေအီး အမျိုးသား ခရစ်ကက် အသင်းသည် ၁၉၉၆ ခရစ်ကက် ကမ္ဘာ့ဖလား အတွက် အရည်အချင်းစစ် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် ခရစ်ကက် ကမ္ဘာ့ဖလား အရည်အချင်းစစ် အောင်မြင်ရန် သီသီလေး လွဲခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဩစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန် တွင် ကျင်းပသော ၂၀၁၅ ခရစ်ကက် ကမ္ဘာ့ဖလား အတွက် အရည်အချင်းစစ် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ နောက်ပုံစံ တစ်မျိုး ကျင်းပသော အာရှဖလား ခရစ်ကက် ပြိုင်ပွဲသည် ၂၀၁၆ မတ်လ ပထမပတ်တွင် ကျင်းပနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
အဆင့်မြင့် ပညာရေး စနစ်အား အဆင့်မြင့်ပညာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးကြပ်သည်။ ထိုဝန်ကြီး ဌာန အနေနှင့် ကျောင်းသားများကို ဘွဲ့ကြို တက္ကသိုလ်များသို့ ဝင်ခွင့် ပြုရာတွင်လည်း တာဝန်ရှိသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် လူကြီး စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းမှာ ၉၀% ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ရှိသော လူကြီး ပညာရေး စင်တာ ၈၆ ခုတွင် နိုင်ငံသား ထောင်ပေါင်းများစွာ ပညာသင်ကြားလျက် ရှိကြသည်။ 
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အဘူဒါဘီ နှင့် ဒူဘိုင်းတို့ကဲ့သို့ သီးခြား ကျန်းမာရေး အာဏာပိုင် အဖွဲ့မရှိဘဲ ၎င်း၏ အုပ်ချုပ်မှု အောက်တွင်ရှိနေသော မြောက်ပိုင်း စော်ဘွားနယ်များ အတွက် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍအတွက် ၅ နှစ် ကျန်းမာရေး မဟာဗျူဟာကို ဖော်ထုတ် ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုမဟာဗျူဟာမှ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ပေါ်လစီများကို တညီတညွတ်တည်း ပေါင်းစည်းရန်၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်တင့်သော နှုန်းထားဖြင့် ရရှိနိုင်ရေးကို တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရန် နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား ဆေးကုသရေး အပေါ် မှီခိုခြင်းအား တစ်ချိန်တည်းတွင် လျှော့ချရန် အာရုံစိုက် ရေးဆွဲထားသည်။ ဝန်ကြီး ဌာနမှ လက်ရှိ ဆေးရုံ ၁၄ ခုတွင် နောက်ထပ် ၃ ခု ထပ်တိုးရန်၊ အခြေခံ ကျန်းမာရေး စင်တာ လက်ရှိ ၈၆ ခုအား ၂၉ ခု ထပ်တိုးရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။
အဘူဒါဘီတွင် နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းများနှင့် ၎င်းတို့အား မှီခိုသူများ အတွက် မယူမနေရ ကျန်းမာရေး အာမခံ ထားရှိစေခြင်းမှာ ကျန်းမာရေး ပေါ်လစီ အပြောင်းအလဲတွင် အဓိက တွန်းအား တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အဘူဒါဘီ နေထိုင်သူများသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ထို အစီအစဉ် အောက်၌ စတင် အကျုံးဝင်ခဲ့ပြီး ဒူဘိုင်းမှ ၎င်းတို့၏ အစိုးရ ဝန်ထမ်းများ အတွက် အလားတူ ပြလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဖက်ဒရယ် ဥပဒေ အရ နိုင်ငံ အတွင်းရှိ အဲမရိတ် နိုင်ငံသားများ အားလုံးနှငင့် နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းများ အာလုံးတို့မှာ ပေါင်းစပ်ထားသော မယူမနေရ ကျန်းမာရေး အာမခံ အစီအစဉ်ဖြင့် အကာအကွယ် ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ The introduction of mandatory health insurance in Abu Dhabi for expatriates and their dependants wasamajor driver in reform of healthcare policy.
↑ ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ ၇.၃ The World Factbook။6April 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉.၀ ၉.၁ Economic diversification in the GCC countries။5December 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Thomas၊ Jen။ "Ancient secrets of Sir Bani Yas unveiled"၊ The National၊ 12 December 2012။ November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 22 December 2015။
↑ History of the UAE Archived 20 December 2015 at the Wayback Machine.. Sinimar.eu. Retrieved on 10 October 2015.
↑ Tore Kjeilen (4 April 2007)။ Trucial States။ Looklex.com။ 20 February 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UAE History & Traditions: Pearls & pearling။ UAEinteract။6February 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Oil and Gas in the UAE။ 23 November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sean Foley (March 1999). "The UAE: Political Issues and Security Dilemmas". Middle East Review of International Affairs3(1). Archived 13 June 2013 at the Wayback Machine. မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 13 June 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UAE Government: Political system။ UAEinteract။ 13 February 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2016-02-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၇.၀ ၇၇.၁ United Arab Emirates Reports။ Freedom House။ 13 May 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UAE Eyes Ways to Discourage Marriage with Foreigners Archived5November 2013 at the Wayback Machine.. Antisystemic.org (21 October 2005). Retrieved 26 January 2014.
↑ UAE Government: Foreign policy။ UAEinteract (1 January 2008)။ 10 June 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Hollande says UAE Rafale jet deal depends on price"၊ 15 January 2013။4April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 30 September 2015။
↑ ၉၄.၀ ၉၄.၁ UAE, Bahrain say 50 soldiers killed in Yemen attack။ 16 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ U.N. Commission on Crime Prevention and Criminal Justice: United Arab Emirates။ Human Rights Voices။ 11 November 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2016-02-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀၆.၀ ၁၀၆.၁ Two women sentenced to death for adultery Archived6October 2014 at the Wayback Machine.. Khaleej Times (25 September 2013). Retrieved on 26 November 2015.
↑ Two sex workers are sentenced to lashes Archived 22 September 2010 at the Wayback Machine.. Khaleej Times. Retrieved on 26 November 2015.
↑ ၁၂၉.၀ ၁၂၉.၁ VI. Charges and Penalties against Domestic Workers။ Human Rights Watch (2014)။3February 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Drink-drive student to get 80 lashes။ Khaleej Times (27 March 2013)။ 21 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Couple deny kissing on Abu Dhabi Corniche | The National Archived 29 June 2017 at the Wayback Machine.. Thenational.ae (10 January 2013). Retrieved on 2015-11-26.
↑ Evans, Robert. (9 December 2013) Atheists face death in 13 countries, global discrimination: study Archived 13 June 2015 at the Wayback Machine.. Reuters. Retrieved on 2015-11-26.
↑ ၁၅၇.၀ ၁၅၇.၁ ၁၅၇.၂ Bakr၊ Amena။ "Woman jailed in Dubai after reporting rape hopes to warn others"၊ Reuters၊ 21 July 2013။5November 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 22 July 2013။
↑ Couple deny kissing on Abu Dhabi Corniche။ 29 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “A man jailed and sentenced to 80 lashes for drunkenly kissing his girlfriend on the Corniche”
↑ ၁၇၀.၀ ၁၇၀.၁ "Swearing on Whatsapp 'will result in £40,000 fine and deportation, UAE rules'"၊ The Independent၊ 16 June 2015။9April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on5March 2016။
↑ Defining Sharia's role in the UAE's legal foundation။ The National (Abu Dhabi)။ 8 April 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Federal Law No (3) of 1987 on Issuance of the Penal Code။ United Nations Office on Drugs and Crime။ 25 May 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ المشارق။ 19 December 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UAE: Ruthless crackdown on dissent exposes 'ugly reality' beneath façade of glitz and glamour။ Amnesty International။ 10 February 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Emirati victim of enforced disappearance seen in state security prison » Emirates Centre for Human Rights Archived 26 November 2015 at the Wayback Machine.. Echr.org.uk (14 March 2014). Retrieved on 26 November 2015.
↑ UAE must reveal whereabouts of 'disappeared' Libyans and Emiratis: HRW Archived 20 September 2018 at the Wayback Machine.. Middle East Eye (6 October 2014). Retrieved on 26 November 2015.
↑ Hezbollah and the Gulf။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Indian workers jailed in Dubai over violent protest"၊ 24 February 2008။ 11 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on6October 2014။
↑ Modern Day Slave Labor: Conditions for Abu Dhabi's Migrant Workers Shame the West။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Three held for parody video on Satwa streets" Archived 18 October 2014 at the Wayback Machine., Khaleej Times,9December 2013. Retrieved 26 January 2014.
↑ Dubai Mall dress code။ 12 December 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ GDP to hit $474.2b in 2018။ Khaleej Times (4 July 2013)။6January 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "From sand to sea"၊ International Railway Journal၊ 21 March 2012။ 12 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 23 March 2016။
↑ Hosting of Expo 2020 unprecedented achievement for the region, says Sultan Al Jaber – WAM။7September 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dubai Expo will open up unlimited opportunities – WAM။7September 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Net migration rate။ Cia.gov။ 8 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Habboush, Mahmoud. (10 October 2013) Call to naturalise some expats stirs anxiety in the UAE Archived 14 July 2014 at the Wayback Machine.. Uk.reuters.com. Retrieved on 10 October 2015.
↑ Mcintosh၊ Lindsay (16 June 2008)။ Terror red alert for 100,000 British expats in Dubai။ The Scotsman။ 21 August 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Life expectancy at birth။ The World Factbook။6March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၉၄.၀ ၂၉၄.၁ Average life expectancy in UAE rises to 75 years။ Uaeinteract.com။ 22 June 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sex ratio။ The World Factbook။ 30 November 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UAE Travel& Tourism: Food & Drink။ UAEinteract။ 31 January 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Qualification – Cricket World Cup 2015 Qualifier | ICC Archived4November 2013 at the Wayback Machine.. Icc-cricket.com (10 April 2015). Retrieved on 26 November 2015.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ&oldid=744144" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၂:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။